Real Madrid oo Sii Kordhisay Dhibcaha ay Ku Hogaamineyso Horyaalka Spain “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Real Madrid oo Sii Kordhisay Dhibcaha ay Ku Hogaamineyso Horyaalka Spain “SAWIRRO”
Kooxda Real Madrid ayaa afar dhibcood ka dhigtay dhibcaha ay ku hogaamineyso horyaalka Spain ee La Liga,ka dib markii ay 2-0 uga badisay kooxda Elche.
Tababare Carlo Ancelotti ayaa caawo kulankiisii 100-aad leyliyay kooxda Real Madrid.
Gool-hayaha kooxda Real Madrid ahna kabanka kooxda kooxda Iker Casillas ayaa caawo kulankiisii 500-aad ee horyaalka Spain u saftay kooxda Real Madrid.
Kooxda Elche oo lagu ciyaarayay garoonkeeda Manuel Martinez Valero ayaana wax gool ah laga dhalin qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxda Real Madrid ciyaaryahan Karim Benzema.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii 69-aad ee ciyaarta goolka labaad oo madax ahaa u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Ronaldo oo hogaaminayo gool dhalinta hoyaalka ayaa dhaliyay goolkiisii 27-aad ee horyaalka Spain ee La Liga.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahanka sedaxaad ee ugu gool dhalinta badan taariikhda kooxda Real Madrid,isagoo caawo dhaliyay goolkiisii 290-aad,isagoo ku dhaliyay 281-kulan.
Ciyaaryahan Santillana oo weerarka uga ciyaari jiray xulka qaranka Spain iyo Real Madrid ayaa 290-gool ugu dhaliyay kooxda Real Madrid 645-kulan laga soo bilaabo sanadkii ugu horeeyay oo uu u saftay kooxda oo ahaa sanadkii 1971-dii.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa 15-gool ka hooseeya ciyaaryahanka labaad ee ugu gool dhalinta badan kooxda Real Madrid oo ah Alfredo Di Stefano,isagoo 33-gool ka danbeeya ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan kooxda Real Madrid oo ah Raul.
Ciyaaryahan Raul ayaa hogaaminayo gool dhalinta kooxda Real Madrid,waxana uu dhaliyay 323-gool.
Ciyaaryahan Alfredo Di Stefano ayaa kaalinta labaad ku jiro,waxana uu kooxda Real Madrid u dhaliyay 305-gool.
Halka Ciyaaryahan Ronaldo uu caawo noqday ciyaaryahanka kaalinta sedaxaad uga jiro gool dhalinta kooxda Real Madrid,isagoo dhaliyay 290-gool.
Kooxda Real Madrid ayaa horyaalka Spain ee La Liga ku hogaamineyso 60-dhibcood,halka kooxda Elche ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Howlgallo amni xaqiijin ah oo laga sameeyay Degmada Dhuusamareeb